Ireo tovovavy shinoa"tsotra". Sy ny eritreritra hafa mifototra amin'ny hazo fijaliana ara-kolontsaina fivoriana-Lasopy Shina - Ny LAHATSARY amin'ny CHAT maneran-tany! Ny firenena rehetra, vahiny, ny tontolo izao.
Ireo tovovavy shinoa"tsotra". Sy ny eritreritra hafa mifototra amin'ny hazo fijaliana ara-kolontsaina fivoriana-Lasopy Shina
ny Herinandro dia tsotra amin'ny lafiny rehetra
Victor Zheng Sinoa toetra monina ao Etazonia izay navoaka tamin'ny fiteny Shinoa sy anglisy amin'ny isan-karazany ireo lohahevitra mifandraika hazo fijaliana-fihetsehana ara-kolontsainaNy fihetsehana ny fivoriana foana mahaliana hitandrina, indrindra fa ny fety mitovy amin'ny fomba samy hafa ny kolontsaina na ny olona ao amin'ny toerana samihafa fantany ny sasany ny asa na ny tsy voasoratra ny fitsipika. Ao Shina, ny malaza amin'izao fotoana dia ny"fahazavana ankizivavy", izay mifototra amin'ny sasany hevitra fa ny ankizilahy ny ankizivavy (matetika monina any Atsinanana sy Atsimo-Atsinanan'i Azia firenena) manohana ny raharaham-bahiny ny olona. Ity lohahevitra ity, nahaliana ahy, satria ny zava-tany maro ny resadresaka manokana amin'ny namana ao Shina sy ny any ivelany, ary koa ao amin'ny toe-javatra ara-kolontsaina samihafa. Amin'ny sakafo antoandro, dia efa ny fifanakalozan-kevitra amin'ny olona iray hafa - ny olona tafiditra lalina ao amin'ny haino aman-jery Sinoa izao tontolo izao - momba ny kolontsaina ny lanja sy ny maha-zava-dehibe ity lohahevitra ity. Hoy izy nitantara izany lohahevitra toy ny maharary na ny faritra saro-pady mahakasika ny firenena ara-kolontsaina, ny avonavona, izay mahatonga azy mahavariana indrindra ao anatin'ny teny Sinoa manodidina. Ny teny hoe"mora ny ankizivavy,"dia hita ao amin'ny Aterineto Sinoa sy ny izany dia matetika hita ao amin'ny mpaneho hevitra tantara na ny horonan-tsary amin'ny volon-koditra ny fifandraisana. Ohatra, ao amin'ny vanin-taona mafana, tantara iray izay niteraka adihevitra mafana dia noraketina tamin'ny Espaniola ny fananana firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy Sinoa tao Chengdu. Ny valin-ranged avy tsy nihantsy ny fahatezerana tao amin'ny fomba fijery fa ny vahiny mahita anao, Sinoa vavy, afa-tsy ny hoe"mora"sy ny"kilalao."Mba hahatonga ny vehivavy ao Shina no manahy be loatra momba ny vahiny. hoy,"global times". Mba tsy ho adala, vehivavy Shinoa izay manahy be loatra momba ireo vahiny nangataka"Shina isan'andro". Maro fotsy ny olona no mihevitra fa ny Sinoa vavy dia"mora ny ankizivavy". nangataka ny peta-drindrina ao amin'ny Zhuihu, ny q lahatsary Mampiaraka sehatra. Ny toerana efa nitsidika mihoatra ny iray tapitrisa ny fotoana.
Indraindray dia hita fa ny zava-misy fa tsy mitovy fihodirana, ny fifandraisana mety misy foana ny miteraka hatezerana:"raha ny marina, ny BBC nanao lahatsary toy ny daty, ny Sinoa zazavavy, tezitra mafy ireo mpampiasa Aterineto,"hoy ny lohateny lehibe, izay mandray ny silaka ny sinusitis.
Tsy maninona raha toa ka nataony eo ambany ao amin'ny BBC lahatsary, fa raha ny marina antsoina hoe"Ahoana no mba hitandrina ny ankizivavy Shinoa"sy ny tsikera momba ny zavatra fotsy lehilahy tsy atao raha te-hitandrina ny Shinoa zazavavy ka hatramin'izao.
Ny tena tsara tarehy teny aho dia efa za-draharaha
Ny ankamaroan'ny olona, fara fahakeliny, superficially mahafantatra ny hevitra raiki-tampisaka mifandray amin'ny Sinoa ny lehilahy sy ny vehivavy. Heveriko ho toy ny Amerikana, ny Sinoa, foana aho fantatra ny fomba fijery mikasika ny Shinoa lehilahy mitaraina (na tsy mitaraina) fa ireo tovovavy Shinoa"mora". ny mifanohitra amin'izany lafiny izany vola madinika dia ny vehivavy sy ny hevitra mampidi-doza, Eny, fa izahay dia tsy afaka ny tsy miraharaha izany tsy misy. Ka tiako mba jereo ity lahatsary manaraka ity (nomeko ny iray hafa ny adihevitra mikasika ny fomba fijery ny Sinoa sy Azia ankizilahy manerana izao tontolo izao).
Ny fanehoan-kevitra ny Weibo sy Bili kaonty, raha Shina dia tsy reflexive (raha ny marina, na inona na inona afaka), misolo tena fara-fahakeliny iray ampahany amin ny an-jatony tapitrisa ny Sinoa amin'ny aterineto ny olom-pirenena.
Ny olona sasany milaza fa ny mora zazavavy stereotype misy satria mora zazavavy dia fohy endrika ho an'ny tanjona zava-misy fa ny Sinoa vavy tia vahiny ny olona: Hollywood sy ny hafa Tandrefana ny modely ny hatsaran-tarehy nanenika ny Shinoa nohaniny, ny fanaovana ny vahiny jereo tsara tarehy amin'ny fampitahana azy ireo.
Hafa nasionalista vondrona: ny maha mahery setra amin'ny Sinoa ny ankizivavy dia tsy ho mora raha oharina amin'ny zazavavy avy any Azia Atsimo atsinanana na ireo faritra hafa any Azia Atsinanana, noho ny maha -"mora"dia midika fa ireo ankizivavy ireo"volamena mpitrongy tany"ny fiainana ao amin'ny ara-toekarena sahirana ny firenena. Ny fanehoan-kevitra sasany dia nakedly vehivavy sy fankahalana vahiny, manome tsiny ireo vehivavy izay ihany koa ireo tompon'andraikitra amin'ny"ivelany fako", izay ny vola sy ny voninahitra, raha mbola ny vahiny no miampanga ireo vahiny be loatra amin'izany. Tsy ilaina intsony ny milaza, ireo tsy inona isika fa hoe tsara ny heviny, ary izy ireo dia lavitra avy amin'ny misaina sy ny kosa somary niova kely ny valiny fa ny mpandray anjara ny manome: Ianao niresaka momba ny fitarihana ny Hollywood (-ny faharoa ho fotoan-dehibe), ny zava-misy fa maro ny tanora tsirairay vahiny mirona ho tonga any Shina (ary koa ny kolontsaina fiantraikany vokatry ny Japoney haino aman-jery (.
Mandritra izany fotoana izany, maro ireo mpandray anjara ihany koa ny nanipika fa misy fomba maro mba hanehoana ny fisian'ny fandraisana an-tendrony ireny, ary maro ny vahoaka Shinoa izay tsy nataony mahazatra weirdness amin'ny faladiany.
Angamba no teboka manan-danja indrindra dia ny atao amin'ny iray ny mpandray anjara amin'ny farany: na inona na inona ny fifandraisana tahaka ny etỳ ambonin'ny tany, afa-tsy ny olona any fa ny fifandraisana hoe nahoana izy ireo no niaraka, ary farany ny hafa kosa dia tsy natao ny milaza ny momba izany. Oh, ao amin'ny firenena izay tsy ara-poko ny olana dia niadian-kevitra ampahibemaso ary ampahibemaso, izany no malaza indrindra fanehoan-kevitra ankoatra ny horonan-tsary momba ny Bili:"ny Shinoa fitiavana fotsy hoditra, fa tsy noho ny avy any ivelany ny fitarihana, dia efa toy izany hatramin'ny fahiny."My personal famaranana avy amin'ny fanehoan-kevitra dia efa hita fa olona manana be dia be ara-kolontsaina, rehareha, fa izy ireo koa dia efa tena miharihary fa tsy matoky tena. Toa tamiko fa ny fiaraha-monina dia mbola miady amin'ny hevitra raiki-tampisaka sy ny fomba fijery ary miezaka vao hahalala izay ny valiny marina dia tokony ho. Tsy azoko antoka hoe ohatrinona ny karama nandray anjara ny mamokatra ny adihevitra, fa ny zava-dehibe indrindra dia ny resaka dia afaka manohy saina tsy miangatra, amin'ny fomba mijery ny tena, ary angamba aza usefully. Tovovavy shinoa any Sina, Taiwan ary ao Hong Kong dia azo antoka fa ho mora fotsy ny ankizilahy. Raha fotsy hoditra ianao dia tsy afaka hanao an-jatony fizaham-pahasalamana any amin'ireo firenena ireo, ianao koa dia afaka ho lasa lehilahy miray amin'ny lehilahy, satria any amin'ny toeran-kafa ianao dia efa mamoy fo. Etsy ankilany, vehivavy Shinoa any amin'ireo firenena ireo mavitrika hiaro izany, izy ireo dia mirehareha ihany no fotsy ny olona.
Saika ny rehetra ny fotsy hoditra dia afaka fotsiny ny firaisana ara-nofo, dia ny vehivavy Sinoa mandany ny andro manaraka, ny fanamarinan-tena io amin'ny filazana fa izy dia matetika nentin-drazana indrindra ny tovovavy.
Angamba ihany izany fotoana izany foana no mitranga ao amin'ity lamin'ny, fa ny firaisana ara-nofo dia mora foana, izany no ao andamosiny.
Miarahaba, Victor, aho nahita ny lahateny natao tany Ny lahatsoratra tena tsara sy tsy Mety tsy manaiky amin'ny zavatra rehetra nosoratanao.
Aho na dia niezaka ny nanazava ny fitaka rehetra aho dia nahafantatra ny momba ny voalohany ny tovovavy ao Shina ao anatin'ity boky ity.
Lazao amiko izay hevitrao, ity boky ity koa dia miresaka momba ny fomba hahazoana Tandrefana ankizivavy ao Shina, ary izaho te-hahalala ny zavatra tianao holazaina, misaotra anao be dia be noho ny hevitra, andeha isika hiresaka ela, miala tsiny aho milaza fa ireo no FITSIPIKA, avy any ivelany ny vehivavy rehetra mora rehefa tonga ny vola mba hiala amin'ny fahantrana ny vehivavy iray avy ny firenena, fa ny zavatra tsy mety ianao, dia jereo fa mandeha amin'ny làlana mora, ary na inona na mandra-pahoviana ianao efa miankin-doha, dia manao zavatra ianao, dia tia azy.
raha ny marina dia tsia, indrindra fa rehefa misy faha-samy hafa. Hitako ireo vehivavy Aziatika eto AMINTSIKA, izay no mora mino, mihevitra aho fa rehefa tratra, ny buddy iray izay mahita ny vaovao izay tonga eo ianao, raha toa ianao raha tsorina dia nanatona azy raha izy no manana sakafo atoandro, dia nipetraka teo anilany amin'ny manaraka ny andro sy ny andro hafa rehetra ianao teo amin'ny fandriany, dia tsy nahafantatra ny rehetra ant, dia nanao na inona na inona izy tia hamadika ahy eny, rehefa nihazakazaka ho azy amin'ny anareo, hoy ianao hoe ianao no mpinamana, na inona na inona nitranga. Ankoatra izany, izy dia reny aho, dia nahatsikaritra fa izy ihany no mikarakara ny tenany, ary noho izany dia ny vadiny no feno am-ponja ny zazalahy, ary tsy afaka milaza bebe kokoa noho ny"Eny". amin'izao fotoana izao, h. Nony efa Shinoa lehilahy iray avy any ivelany ny vehivavy, ny olona rehetra dia niarahaba azy. Rehefa ny Sinoa olona gambles sy mangalatra amin'ny ny Sinoa ny namana iray, dia tsy hahazo na inona na inona manokana ratsy saina, afa-tsy ny mahazatra iray. Na izany aza, rehefa hafahafa ny lehilahy amin'ny Shinoa tovovavy, ny mpivady toa ka ireo hevitra raiki-tampisaka tonga ho kilalao, ny olon-tsotra ankizivavy manana olana mavo ny tazo, sns.
Rehefa vahiny lehilahy milalao amin'ny Sinoa vavy, dia lasa raharaham-barotra lehibe, ary manerana ny Aterineto.
Ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny fanavakavahana tsy Shinoa ny olona tany Asia.
Tsy misy intsony.
Ny sasany fotsiny ny olona tsy afaka hahatakatra ny sasany miaraka izy ireo satria te, na inona na inona ny hazakazaka, ary ny olona sasany hilalao satria ny olona tsy noho ny any Azia hazakazaka no tena fahazavana sy ny mamy sy tsara tarehy sy ny fahalalam-pomba sy ny heviny halako ny mpirehareha fotsy Tandrefana (indrindra Anglo-Saxons) Izy ireo dia tena mafy ho mendrika ny olona, dia aza mandany fotoana, tazovony no tena olana. ny ankamaroan'ny namako, Azia namana tsy haha fotsy zazavavy intsony aho, ny Shinoa tao an-toerana zazavavy. Tena te-ho any amin'ny daty amin'ny Tandrefana ny zazavavy, ka afaka fialonana Shinoa rehetra ny olona tahaka ny etsy ambony. kuku aho ho afa-hisongona an'i Shenyang any Shina mba hihaona tsara tarehy Shinoa tovovavy izay aho Efa miresaka aminao nandritra ny herinandro vitsivitsy izao. Efa nanambady indroa Tandrefana ny ankizivavy ao amin'ny firenena, ary ianao tsy mino fa ny vehivavy aho fa ny olona dia tsy mamo, ary tsy raisina ny sigara aho, ary efa nanararaotra nandritra ny taona maro. Ity vehivavy Sinoa miresaka momba ny teny izay efa tsy dia nandre ny amin'ity firenena ity. Ao ny andro vitsivitsy, dia manidina ho an'i Sina dia ny mba hitsena azy. Misy olona iray manambady vehivavy Sinoa izay efa adala nandritra ny taona maro. Maneho hevitra momba ity fanapahan-kevitra alohan'ny fanaovana ny androm-piainany fanapahan-kevitra. Raha Shinoa hitandrina misy zava-miafina izay mila mahafantatra aho, miangavy mba ampahafantaro ahy.
Misaotra anao be dia be, dia nisy ankizivavy Shinoa amin'izao fotoana izao.
Mieritreritra aho fa ny Sinoa ankizivavy no tena tsara tarehy. Fotsiny aho toy ny anao. Tsy fantatro raha izany no mora na tsia, fa izany dia sarotra ho ahy ny daty vehivavy Amerikana. Aho fotsy Amerikana, sy ny ianao te-hilaza tamiko fa ny Sinoa vavy tia azy. Mieritreritra aho fa ny antony dia ao Shina, tsy misy be isan-karazany. Na izany na tsy izany, manantena aho fa afaka ny ho sipako vitsivitsy taorian'ny daty.
Ny Amin'ny Chat roulette-
dokam-barotra online chat tsy misy video Mampiaraka ry zalahy video ny lahatsary amin'ny chat maimaim-poana amin'ny chat roulette aterineto amin'ny finday afaka mihaona video Mampiaraka izao tontolo izao sary Mampiaraka ny fisoratana anarana amin'ny chat roulette amin'ny zazavavy ny firaisana ara-nofo Niaraka fisoratana anarana